» Dhafarka Badan oo la ogaaday inuu Baabi’iyo Xusuusta
Dhafarka Badan oo la ogaaday inuu Baabi’iyo Xusuusta
Nov 8, 2012 - jawaab	Aqrisatay:4893In aadan hurdin saacado badan ayaa waxa tahay mid caadi ka ah bulshooyinka aduunka, laakis sidaa ma aha, adoo hurdo u baahan hurdo oo aad dhafarto labo saacadood ayaa waxa ay saameyn wayn ku yeelan kartaa awooda xusuus ee maskaxdaada.
Sida aya ku waramaysa jariirada Daily Mail ee ka soo baxday dalka Ingiriiskam, Saynisyahao u dhashay wadanka Mareykanka ayaa ka digay dhafarka mudo labo saacadood ah in uu maskaxdaada ka hor istaagaa in geydiso wax kasta oo la xeriiro xusuusta.
Baaritaan ay sameeyeen saynisyahanadaasi ayaa lagu sheegay in labo saacadood aad ka dhinto saacada hurdo oo sideed saacadood ah ay keeni dhibaato kuugu keeni karto.
Ted Abel oo ah bare saynisyahan ah iyo koox saynisyahano ah oo ka trisan Jaamacada theUniversityofPennsylvaniaayaa waxa ay sheegeen waqtiga casigaan la joogo inaysan dadka agtooda waxba ka aheyn in la dhafro.
Saynisyahana ayaa ku nux nuxsaday: Saacado kamid ah oo aad dhafarto hal habeen waxay keeneysaa in aad wayso xusuus muhiim ah taasoo aysan makaxda awoodi doonin in ay soo celiso xitaa hadii aad saacado badan jiifato habeenka xiga.
« Warbixinta Ka HoreysayDaawo Abwaan Sangub oo ka hadlaya arimo Xasaasi ah	Warbixinta Xigto »Daawo Sawirada Banaanbixi Ka Dhacay Muqdisho	Leave a Reply Cancel reply